Wararka Maanta: Arbaco, Mar 21, 2018-Wafdi ka socda IOM oo kormeeray xarumaha lagu dhaqan-celiyo Al-shabaab ee magaalada Baydhabo
Wafdiga waxaa kormeerkooda ku wehlinayay Wasiir Kuxigeenka Amniga Koonfur Galbeed, C/risaaq Cabdi Aadan iyo Taliyaha Hay’adda NISA ee Baydhabo Maxamed Isaaq Ibraahim Aflow, iyaga oo ku soo wareegay qeybaha kala duwan ee xarumahan.
Markii ay soo dhameyteen kormeerkooda ayeey kulan gaar ah magaalada Baydhabokula qaateen ku-simaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed (Xasan Eelaay).
Labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen, sidii lagu ballaarin lahaa xarumaha Al-shabaab lagu dhaqan-celiyo ee ku yaal magaalada Baydhabo.
Hay’adaha Qaramada Midoobey ayaa dowladd Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka dhisan ka caawiya goobaha lagu dhaqan-celiyo Al-shabaab, kuwooda isa soo dhiiba.
3/21/2018 12:21 PM EST
Arbaco, Maarso, 21, 2018 (HOL)-Wasiirka Maaliyadada Dowlada Goboleedka Hirshabelle Maxamed Maxamuud Cabdulle (Max’ed Dheere) oo wareysi gaar ah siiyay Hiiraan Online ayaa ka war bixiyay arrimo badan oo Dhinaca Maaliyad ah ee Maamulka Hirshabelle.